2014 - Ministry of Education | Page 3
Department of Technical and Vocational Education (DTVE)
Department of Research and Innovation (DRI)
Department of Technology Promotion and Coordination (DTPC)
Department of Myanmar Nationalities’ Languages (DMNL)
Department of Alternative Education (DAE)
Date :9November, 2014
November 9, 2014 - 8:02 am | News
Comments Off on ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်သို့ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာကိုကိုဦးသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်သို့ ရောက်ရှိပြီး ပါမောက္ခချုပ် (တာဝန်)၊ ဌာနမှူးများ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့်
ပထမအကြိမ် သုတေသနလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဆပ်ကော်မတီ အစည်းအဝေး
Date :7November, 2014
November 7, 2014 - 8:00 am | News
Comments Off on ပထမအကြိမ် သုတေသနလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဆပ်ကော်မတီ အစည်းအဝေး
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်ကျော်မြတ်သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသော ပျူမြို့ဟောင်း
နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကဏ္ဍ တိုးချဲ့မြှင့်တင် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေး (၁၂/၂၀၁၄)
Date :5November, 2014
November 5, 2014 - 7:59 am | News
Comments Off on နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကဏ္ဍ တိုးချဲ့မြှင့်တင် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေး (၁၂/၂၀၁၄)
နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကဏ္ဍ တိုးချဲ့မြှင့်တင်အကောင် အထည်ဖော်ရေး အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့တွင် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန
Date :4November, 2014
November 4, 2014 - 7:57 am | News
Comments Off on ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗဟန်းနယ်မြေ)သို့ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာကိုကိုဦးသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗဟန်းနယ်မြေ)သို့ ရောက်ခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၊ Fujitsu Limited မှ
13th International Symposium on New Technologies for Urban Safety of Mega Cities in Asia စာတမ်းဖတ်ခြင်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား
Date :3November, 2014
November 3, 2014 - 7:56 am | News
Comments Off on 13th International Symposium on New Technologies for Urban Safety of Mega Cities in Asia စာတမ်းဖတ်ခြင်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာကိုကိုဦးသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၌ ကျင်းပသော သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊
VP U Myint Swe emphasizes enforcement of Science, Technology and Innovation Law
This Month : 8
Total Hits : 657971
Your IP Address: 10.5.5.138
Ministry of Education (Science and Technology)
Building 21, Nay Pyi Taw, The Republic of Union of Myanmar.
Tel: +95-067-404004, Fax: +95-067-404011
Copyright © 2016 - Ministry of Education (Science and Technology). All Rights Reserved.